‘निर्णायक मोड’मा दिल्लीले सन्दीपलाई अवसर देला ? - Jagaran Post
‘निर्णायक मोड’मा दिल्लीले सन्दीपलाई अवसर देला ?
जागरणपोस्ट २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:२२ खेलकुद
इन्डियन प्रिमियर लिग-आइपिएल क्रिकेटको यो सिजन सन्दीप लामिछानेले खेल्ने अवसर पाएका छैनन्।
क्यारेबियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गरेर फर्किएका सन्दीप त्यतैबाट दुबई पुगे पनि उनलाई एकै खेलमा पनि दिल्लीले पत्याएको छैन।
आइतबार हुने दोस्रो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दैछन्। तर यो खेलमा सन्दीपले अवसर पाउने सम्भावना त्यति बलियो देखिँदैन।
पहिलो क्वालिफायरमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग पराजित भएपछि दिल्लीले फाइनल पुग्ने दोस्रो अवसरका रुपमा हैदराबादसँग भिड्न लागेको हो।
यसअघि शुक्रबार राती भएको एलिमिनेटरमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरलाई पराजित गरि हैदराबाद क्वालिफायरमा पुगेको छ।
पछिल्ला केही खेलमा दिल्लीले कमजोर ब्याटिङ गरिरहेको छ। मुम्बईविरुद्ध २ सय १ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सुरुका तीन जना ब्याट्सम्यान शून्यमै आउट भएका थिए। अलराउन्डरद्वय अक्सर पटेल र मार्कस स्टोइनिसको ब्याटिङ मात्र उल्लेखनीय रहेको थियो।
विदेशी खेलाडीको कोटामा एनरिच नर्त्या,कागिसो रबडा र स्टोइनिस परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। बाँकी एक विदेशी खेलाडीको कोटामा पछिल्लोपटक ड्यानियल साम्सले खेलेका थिए।
यी तेज बलर पछिल्ला दुई खेलमा निकै महँगो बनेका छन्। हैदराबादसँग हुने खेलमा परिवर्तन हुन सक्ने विदेशी खेलाडी यीनै हुन्। यदी अवसर पाए सन्दीपले साम्सकै ठाउँमा मात्र मौका पाउने सम्भावना छ।
तर दिल्लीलाई यतिबेला ब्याटिङ सुधार गर्ने चुनौति छ जुन सन्दीपबाट पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन। सिमरन हेटमेयर, एलेक्स कारेजस्ता ब्याट्सम्यान बेच्नमै छन्। अर्को कुरा दिल्लीमा रविचन्द्रन आश्विन र अक्सर पटेलजस्ता स्पीनर नियमित रुपमै टोलीमा छन्।
त्यसैले यो सिजन ‘म्याच एक्सपेरियन्स’ नभएका सन्दीपलाई दिल्लीले ‘दाउ’मा राख्न सजिलो देखिँदैन।
तर दिल्लीमा अहिले खेलिरहेका ब्याट्सम्यानमा पनि बलियो क्षमता छ। श्रेयस अय्यर, रिसभ पन्त, शिखर धवन, पृथ्वी श, अजिन्क्या रहानेजस्ता राम्रा ब्याट्सम्यानहरु छन्।
यी ब्याट्सम्यानले आफ्नो प्रदर्शन सुधार गरे मात्र पनि दिल्लीलाई सजिलो हुन सक्छ। दिल्लीको बलिङ राम्रो छ। त्यसमा सन्दीपको उपस्थितिले हैदराबादलाई कम योगफलमा सीमित गर्ने रणनीति सफल हुन सक्छ।
त्यसका लागि दिल्लीका भरपर्दा ब्याट्सम्यानले क्षमताअनुसारको प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदी त्यसरी विश्वास गरेमा दिल्लीले सन्दीपलाई उतार्न सक्छ।
दिल्ली हालसम्म आइपिएलमा फाइनल पुग्न सकेको छैन।